SingForYou.net - Ma Machit Loe Ma Phyit
Ma Machit Loe Ma Phyit
Tags : မမအတွက်....
By : chan2008 on Feb 3, 2010
Ma Machit Loe Ma Phyit's Description
SFY က မမတစ်ယောက်အတွက်ပါ... ကျွန်တော်ဒီသီချင်းလေးကို နားညည်းခံပြီး Gtalk မှာ voice နဲ့ နားထောင်ပေးတဲ့... မမ အတွက်ပါ... မမရေ... မမ နားထောင်ပေးပါဦး... မမ ရဲ့ ...... SFY frds and family... အားပေးနားစဉ်ပေးလို့ တကယ်ရှယ် ကျေးဇူးပါဗျာ... SFY Admin နှင့် upload လုပ်ပေးတဲ့လူကို လည်း အထူးကျေးဇူးပါဗျာ....
MDY_thu_lay on Feb 17, 2010 0
အလေ့တော်.. ရှောင်နေရမလို ဖြစ်နေပြီ.. ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်
khait twar p .. 5* .... :D
paradise on Feb 4, 2010 0
annnnnnnn ba wa ta par pyaung war pyi lar chan lay yay....:D very nice......*******
:mm ........... :P arr pay twar tal nal thu lay ........... mite tal so htar tar ........ :clap :clap:clap........ ******************* twayamyar kyi pay khae p!...... >>>>>>>>>>>> Minkha~!
whitekisslay on Feb 4, 2010 0
nyi ma layy chann yayy so twer tar ayann kg tal...mama 1youk kyite mhar par:))....arrr payy narr sinn twer par tal nor!!!
seven on Feb 4, 2010 0
~~ကျွန်တော်ရေ....အားပေးသွားတယ်နော်... ဆိုထားတာလေးကောင်းတယ်... ***************************!!~~.
sumaylay on Feb 3, 2010 0
kg lite tar chan lay yay.........so twar tar ayan mite tal..........*****
raj on Feb 3, 2010 0
eagle on Feb 3, 2010 0
dar lay lel ta myo lay nae kg tar pal bya,,,,,,,,,,,, arr pay nar sin twar pi naw..
sweetorchid on Feb 3, 2010 0
ကောင်တယ်...အားပေးသွားတယ်ကျောင်းတုန်းကမောင်လေးတွေကိုတောင်လွမ်းသွားတယ်ဒီ song လေးက Orchid တို့ final Year တုန်းက အရမ်းခေတ်စားတဲ့ song lay ...မ..မှမချစ်ရင်...နောက်တစ်ယောက်လိုက်ရှာမယ်....လို့ဆိုနေကြလေ...
EL... noutasin lay ta mo par larz....:P...:)))))))))))))... nar sin arr pay thwar par te chint...:clap ;clap :clap...BRAVOOOOOOOO...>>>>>>>>>>>
ကိုယ့်ကိုလာစသွားလို့ ပြန်လိုက်လာတယ် ချမ်းလေးရေ :D ...ဆိုထားတာ တကယ်မိုက်တယ်ကွာ... အားပေးသွားပါတယ်ကွာ... 5*
Ilovemusic on Feb 3, 2010 0
good tel....mite tel...lann tel.....5* pay mel...
Thanzinchitthu on Feb 3, 2010 0
mite tal sis chan yay..de lo so lite tot lal 1 myo listen loe kg tar pal..arr pay twar p naw..
chitmoe2009 on Feb 3, 2010 0
arr pay thwar par tal chan yay....
myobala on Feb 3, 2010 0
chan2008 on Feb 3, 2010 0
မှန်တာပေါ့.. မသိဘူးလား အရင်ကတည်းက... အဲလိုင်းထဲက.. ဆိုတာ.. ဟီးဟီး.... အမ်.. နောက်မှသိသွားတယ်နဲ့တူတယ်.... :) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. တကယ်... ပါဗျာ...
pp01 on Feb 3, 2010 0
:O fullmood nae chan lay yay..so nice and sweet:D*****
forevermoe on Feb 3, 2010 0
channnn ..ta kal kg taldsong lay so htar tarr ...full mood nae chann mama ta yout like mhar parr ...mamoe arr pay twer par tal shinn..**************************:)
thant on Feb 3, 2010 0
ma ma narr htaung pay par oo so tot........auntie toet narr htaung lo ma ya buu lar tuma lay yay........chan toet ka tot shal bae naw......soooo sweet....********
khanttayza on Feb 3, 2010 0
Good one !!! nice to listen par byar !! arr pay thawr par tae ************ for Mr.Chan
skywalker on Feb 3, 2010 0
ommm..ta kal kg ..ayan kg ..mite tal mama tg pyit chin lar p ...:)))))
hippo on Feb 3, 2010 0
ချမ်းလေးရေ ဆိုထားတာလေး ကောင်းလိုက်တာ ... *****
turikimuriki on Feb 3, 2010 0
bae thu ko pyaw tar lae hum? SFU myar ka mama tweamyar kyi so taught ... thi taught buu... really nice singing par sis chan lay ... ? mama taught sisaso ko like thwar mhar par ... 5*))))))))))))))
Zmg on Feb 3, 2010 0
Gtalk မှာတောင် သီချင်းဆိုပြ တယ်ဆိုတော့ တော်တော် ဝါသနာက မသေးဘူး..:P:P....မိုက်ပါတယ် ဆိုထားတာ ကောင်းပါတယ်...************** for u
ဟီးဟီး ဟိုဘက် က နားထောင်လား နားမထောင်လား မသိဘူးဗျ.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
brownlay on Feb 3, 2010 0
hey, this matches your vocal.. very nice *************!
zool111 on Feb 3, 2010 0
အရပ်ရှစ်မျက်နှာ မှာနေထိုင်နေကြတဲ့မမ များကလည်း ရင်တွေခုန်နေလောက်ပြီထင်တယ် မာနကြီးတဲ့မမ ပေါ့နော် သီချင်းစာသားအရပြောရရင်... ဒို့ ကို ပြောတာလားလို့ စိတ်ထဲတောင်ဟာကနဲဖြစ်သွား တာပဲသိလား ဆက်ဆိုပါအုံး အမြဲနားစဉ်နေပါတယ်....
တကယ်မသိတာလား မမရေ... မမရေ.. ကျွန်တော်က တစ်ယောက်တည်း အတွက်ပါဗျာ... မမရေ... ဟုတ်လား... ဟာကနဲလားဗျာ.. အဲလောက် အစွမ်းကောင်းမယ်လို့ မထင်ဘူးဗျာ... မမရေ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ... တကယ်ကျေးဇူး
ngenge09 on Feb 3, 2010 0
ပိာတ် ဘယ်က မမလည်း :P ဆိုသွားတာတော့အရမ်းကောင်းတယ် ချမ်းလေးရေ 5*****
အို... ပြောပြဘူး... သတ်ချင်သတ်... ဟီးဟီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ... လားအားပေးလို့
Subscribe to chan2008